वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया गएका नेपालीको आत्महत्या गर्नेक्रम बढेको छ । सो समस्या र समाधानका बारेमा सामाजिक अभियन्ता तथा एनआरएनए आइसिसी एसिया महिला संयोजक जुनु गुरुङसँग कोरियामा सीपोष्टन्यूज का लागि एसपी यादवले गरेको कुराकानीकाे साभार
नेपाली युवाहरुको वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने क्रम जारी छ, योग्य, दक्ष जनशक्ति बाहिर पठाएर मुलुकको पुर्ननिर्माण कसरी हुनसक्छ ?
हामी नेपालीहरु बेरोजगारीको भारी बिसाउन र आफ्नो दैनिक जीवनको न्यूनतम आवश्यकतालाई पूरा गर्नका निम्ति विदेशिने गरेका छौं । दैनिक १७०० को संख्यामा नेपाली युवाहरु विदेशिनु मुलुकका दुर्भाग्यपुर्ण हो । सामान्य दैनिकी टार्ने सपना बोकेर न्युनतम ज्यालामा पनि श्रम बेच्न जानेहरु र उच्च शिक्षाका सर्टिफिकेट हातमा बोक्दै पिआरको सपना देखेर यूरोप, अमेरिकातिर भौतारिनेहरु र इजरायल, कोरिया, जापानको राम्रो आय आर्जनको सपना बोकेर बिदेश पुग्नेहरु सबै नेपाल आमाका प्यारा सन्तानहरु हुन् । यी तीन किसिमका युवायुवतीहरुले ज्यान हत्केलामा राखेर आर्जन गरेको आय अर्थात रेमिट्यान्सबाट नै हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चलिरहेको छ र राज्य पनि यसैमा मख्ख छ । जुन यहाँले भने जस्तै निकै दुःखत कुरा हो ।
के वैदेशिक रोजगारीले नेपालीमा सम्पन्नता पनि ल्याएको छ ?
नेपाल सरकार र कोरिया सरकारबीच २००७ मा इपिएस सम्बन्धि श्रम सम्झौता सम्पन्न भएपछि नेपाली युवाका लागि धन कमाएर भविष्य उज्जवल पार्ने अर्को मौका मिल्यो । इपिएस शुरु भएपछि वर्षेनि कोरिया जान हजारौंको लाइन मात्र लागेन, अवैधानिक रुपमा कोरिया जाने र वैवाहिक भिषामा कोरिया जानेहरुको संख्या पनि क्रमश घट्दै आएको छ ।
नेपालभित्र कोरियन भाषाको ज्ञान दिने संस्थाहरुले गर्दा र पर्यटनको क्षेत्रमा पनि कोरियन पर्यटकको ओइरो नेपालमा लाग्न थालेको छ । नेपाललाई हिमालयको देश भनेर कोरियनहरुलाइ बुझाउन सजिलो भएको छ ।
अहिले हाम्रो दैनिक जीवनमा र धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा नौलोपनको बिकास पनि भएको छ । यो सबै त्यतिकै भएको होइन, नेपाली कामदारहरुको लगनशिलता र मिहिनेतको परिणाम स्वरुप सारा क्षेत्रमा यसको सकारात्मक प्रभाव बढेको हो । कोरियामा हाम्रो रगत र पसिना मात्र पोखिएन, हाम्रो सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन शैलीमा आमूल परिवर्तन आएको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन् ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरियामा आउनेक्रम निकै बढिरहेको छ, तपाइ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
वैदेशिक रोजगारीका लागि इपिएस प्रणालीले पूर्वको मेचीदेखि पश्चिमको महाकालीलगायत कर्णाली सम्मका गाउँघर सबैतिर एकै साथ प्रभाव पर्न गयो । एउटा दुर्गम गाउँको झुप्रोमा बस्ने र काठमाडौंको महलमा बस्ने नेपाली एकै साथ आफ्नो भाषिक ज्ञान र शारिरिक स्वास्थ्य क्षमताको आधारमा कोरिया उड्न पाएका छन् । कोरियाको रोजगारीले जाती, भाषा, वर्ग र क्षेत्र सबैलाइ समेटेको छ ।
९० को दशकमा र त्यस पछिका केही वर्ष कोरियामा हामीले अधिकांश मध्यम वर्ग वा पूँजिपति वर्गका नेपालीहरु भेट्ने गर्थ्यौ । तर इपिएस शुरु भएदेखि आजकाल सबै वर्गका नेपालीहरु भेट्न पाउँदा गर्व महसुस हुन्छ । एकातिर नेपाली युवाहरुको आर्थिकस्तर माथि उठाउन वैदेशिक रोजगारीले मार्ग प्रसस्त गरेको छ भने अर्कोतिर दिनहुँजसो विदेश उडेर आकाशमा जान्छन् , तर देशमा फर्किदा लासका बाकसमा फर्किन्छन्, यसरी लासका बाकस भित्रिने क्रम पनि बढेको छ जुन एकदमै दुःखद छ ।
कोरियामा नाटकिय रुपमा मृत्यु हुने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ, किन ?
२०७४ को पुस १ गतेदेखि २०७६ को श्रावण ७ गतेसम्ममा करिब डेढ दर्जन नेपालीले कोरियामा मृत्यु भइसकेको छ । कोरियामा आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि बढ्दो छ । २०१८ मा कोरियामा जीवन गुमाउने दाजु भाईको श्रद्धाञ्जली गर्दा प्रत्येक घटना अन्तिम बनोस् भनेर कामना गरिरह्यौं । तर हरेक वर्ष नाटकिय रुपमा मृत्युका खबरले तिब्रता पाउन थालेको छ ।
कम्पनीको काम गर्दागर्दै दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउने वा सुतेकै ठाउँमा मृत्यु भएका घटनाहरु हामीले सामान्यतया जहाँ पनि सुन्ने गरेकै कुरा हो । तर २०१८ मा कोरियामा हामीले धेरै भन्दा धेरै अकल्पनिय दुर्घटना, मृत्यु र आत्महत्याका घटना प्रत्येक हप्ता वा महिनामा सुन्न थालिएको छ । यस बाहेक कम्पनीमै रोगका कारण अस्वस्थ हुने वा हस्पिटल बस्नेहरुको संख्या कति छ भनेर यकिन गर्न मुस्किल छ ।
अहिले हाम्रो कोरियाको नेपाली समाज अत्यन्तै स्तब्ध छ । एक पछि अर्को नराम्रो खबरहरुको चाङ लाग्न थालेको छ । उन्नती र प्रगतिका समाचारहरु कम सुन्न थालिएको छ । अब हामी सबै मिलेर यस्को सामना गर्नुपर्छ । यो कुनै एक मात्र संस्था वा व्यक्तिको विषय हैन, यस्ता आत्महत्याका घटनाहरु यसरी नै लगातार दोहोरिने हो भने हामीले भोलीका दिनमा नेपाली भनेर गर्व गरेर हिड्न सक्दैनौं । हामीहरु संसार भरी नै आत्महत्या गर्न खप्पिस कायरहरुको उपनामले परिचित हुन बेर छैन् ।
तपाईको विचारमा यो समस्याको समाधन कसरी गर्न सकिएला ?
सौलको नेपाली दुतावास, नेपाल सरकारको श्रम मन्त्रालय र कोरियाको नेपाली सामाजिक संस्थाहरुको सामुहिक पहलमा नै यो समस्याको सहि समाधान निस्किन सक्छ । मानिसको जीवनलाई दुई दिनको जीवन भन्ने गरिएको छ । जीवन र समय धेरै महत्वपुर्ण कुरा हुन् । जीवनको महत्वलाई बुझेर हामीले क्षणिक आवेग वा मानसिक समस्यामा परेर ज्यान त्यसै खेर नफालौं ।
सकारात्मक सोचका साथ जीवनलाई हेरौं । केही पारिवारिक अथवा स्वास्थ्य समस्या आयो भन्दैमा हरेस खानु राम्रो होइन । परदेशमा आउनुको कारण हाम्रो भावी जीवन उज्ज्वल पार्नका लागि हो, न कि महत्त्वपूर्ण जीवनलाई क्षणिक आवेगमा आएर त्याग गर्नु हो । हामी स्वदेश वा प्रवासमा जहाँ रहे पनि आत्महत्या जस्तो कायर्तापूर्ण मृत्यु हुनबाट बच्न धैर्य धारण गर्ने शक्ति भगवानले सवैलाई प्रदान गरुन् यहि मेरो शुभकामना छ ।
कोरिया सम्बन्धित अन्य समाचारहरू
EPS र यस्ले ल्याएकाे आत्महत्याकाे लहर, किन त?
कोरियामा इपिएसले गर्दा प्रवासी मजदुरको मृत्यु भयो, सरकार डब्लुपीएस लागु गर
EPS र प्रवासी मजदुर संगठन, काेरिया - इतिहास देखि बर्तमानसम्म
कोरियाबाट २५ बर्षिय युवा लास बनेर स्वदेश फिर्ता